HARARE, Zimbabwe – Zimbabwe&apos;s ruling party has won a majority of seats in Parliament, the electoral commission announced Wednesday, as the country braced for the first official results of the presidential election.
The ruling ZANU-PF won 109 seats while the main opposition MDC party had 41 in the country&apos;s 210-seat House of Assembly. The commission said 58 seats had yet to be declared.
The commission says it will announce the results of Zimbabwe&apos;s presidential race, pitting President Emmerson Mnangagwa against opposition leader Nelson Chamisa, only after all the votes have come in from across the country.
Mnangagwa&apos;s government, meanwhile, accused Chamisa and his supporters of inciting "violence" by already declaring he had won Monday&apos;s election, the first after former leader Robert Mugabe stepped down in November under military pressure.
Zimbabweans desperately hope Monday&apos;s peaceful vote will lift them out of economic and political stagnation after decades of Mugabe&apos;s rule, but the country is haunted by a history of electoral violence and manipulation that means trust is scarce, despite today&apos;s freer environment.